Ma dhaba in Mustafe Cagjar uu si cad isku-hortaagay qorshe xal loogu raadinaye Cabdi Iley? – Xeernews24
Ma dhaba in Mustafe Cagjar uu si cad isku-hortaagay qorshe xal loogu raadinaye Cabdi Iley?
4. Oktober 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka heleyno ilo ku dhow dhow Madaxweynaha maamulka Somali State Mustafe Cagjar ayaa sheegaya in Madaxweynuhu uu is hortaag ku sameeyay dadaal lagu doonaayay in cafis loogu fidiyo Madaxweynihii hore ee maamulka ee Cabdi Iley.
Mustafe Cagjar, ayaa dadaalkaasi lagu cafin lahaa ka hor istaagay Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka, Ganacsato iyo Odayaal ku xidhan dowlada.
Mustafe Cagjar, ayaa horay u sheegay in Cabdi Cumar uu yahay danbiile u baahan in la mariyo sharciga, isagoo si guud u carab dhabay danbiyada lagu tuhmayo isaga iyo Taliyayaal ciidan oo si wada jira loo xidhay.
Si kastaba ha ahaatee, Mustafe Cagjar ayaa xeer ilaalinta horay ugu wargaliyay in faragalin la’aan lasoo xidho Kiiska Cabdi Cumar oo uu sheegay inuu abuuray cadaalad daro.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/10/73.jpg 360 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-10-04 19:35:182018-10-04 19:35:18Ma dhaba in Mustafe Cagjar uu si cad isku-hortaagay qorshe xal loogu raadinaye Cabdi Iley?
R/wasaaraha Itoobiya oo Cadeeyay Sababta ku Qasbeysa inay Soomaalia Taageer... Trump oo si xun u bah-dilay boqorka dalka Sacuudiga.